နေရောင်ခြည်စွမ်အင်သုံး မျှော်စင်ငယ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း — Seadstem – Southeast Asian Digital
(၄၅) မိနစ် မှ မိနစ် (၆၀)ခန့်
ယခုလုပ်ဆောင်မှုတွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမျှော်စင်ကဲ့သို့ပုံစံငယ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းသည် နေရောင်ခြည်မှရရှိသည့် အပူစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နေသည် အပူနှင့်စွမ်းအင် လွန်စွာရှိသော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ လူသားများ တစ်ရက်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကို (၁၅) ပင် မကြာမြင့်ဘဲ ကမ္ဘာပေါ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ ထိုစွမ်းအင်အများစုသည် ကမ္ဘာပေါ်သို့ အပူနှင့်အလင်းဖြင့် ရောက်ရှိကြသည်။ အဆိုပါ စွမ်းအင်များကို မည်ကဲ့သို့ စုဆောင်းပြီး ကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ကြောင်းကို လူများ ယခင်ကတည်းက စဉ်းစားခဲ့ကြသည်မှာ အံ့သြစရာ မဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း သိပ္ပံပညာရှင်များသည် နေမှ ရရှိသော စွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရန် နည်းပညာများကို သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့အချိန်အခါတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်များ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအပူပေးစက်များနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုစနစ်များကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများစွာဖြင့် နေရောင်ခြည်မှ စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ် သုံးစွဲနေကြသည်။
ထိုစနစ်များထဲတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အပူစုဆောင်းမျှော်စင်ကဲ့သို့သော အပူစုဆောင်းနည်းပညာတစ်ခု ပါ၀◌င်သည်။ အဆိုပါ အပူစုဆောင်းသည့်မျှော်စင်သည် အပူချိန်နိမ့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ရန် အကြံဉာဏ်သည် ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်နှင့်မီးခိုးခေါင်းတိုင် (သို့မဟုတ်) အစုအပုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အခြေခံပြီးရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ကြီးမားသော စုဆောင်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလွန်မြင့်မားပြီး ပါးလွှာသော မျှော်စင်တို့ပါ၀င်သည်။ စုဆောင်းသည့် အဆောက်အအုံသည် အလွန်ကြီးမားသော ဖန်လုံအိမ်တစ်ခုနှင့်တူပြီး မြေပြင်မှ (၆)ပေ မှ (၆၅)ပေ (နှစ်မီတာမှမီတာနှစ်ဆယ်) ဆိုင်းထားသော ကြီးမားပြီး ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော မျက်နှာကျက်ဖြင့် အုပ်ထားသည်။ မျှော်စင်သည် မျက်နှာကျက်၏ အလယ်တွင်တည်ရှိပြီး သူ၏အောက်ခြေတွင် လေ၀င်ပေါက်ကြီးများရှိသည်။ မျှော်စင်၏ အတွင်းပိုင်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကြီးမားသော လေစွမ်းအင်တာဘိုင်ကြီးများ (တစ်နည်းအားဖြင့် ရဟတ်ဘီးကြီးများ) ရှိသည်။
နေရောင်ခြည်သည် စုဆောင်းထားသည့် အဆောက်အအုံပေါ်သို့ကျရောက်သည့်အခါ နေပူချိန်သည် ဖန်လုံအိမ်အတွင်း ပိတ်မိသွားပြီး မျက်နှာကျက်အောက်ရှိ လေနှင့် မြေမျက်နှာပြင်ကို အပူပေးသည်။ လေပူသည် အေးသောလေများထက် သိပ်သည်းမှုနည်းသောကြောင့် အပေါ်သို့စတင်မြင့်တက်လာပြီး အပူစီးဆင်းမှုဟုခေါ်သော လေစီးဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုလေများသည် အပြင်သို့ထွက်ရန်တစ်ခြားနည်းလမ်းမရှိဘဲ မျှော်စင်ထဲတွင်သာ ပိတ်မိနေသည်။ မျှော်စင်အတွင်း မြင့်တက်လာသောလေထုသည် မျှော်စင်၏ အောက်ခြေတွင် ဖိအားနိမ့်ကျစေပြီး လေ၀င်ပေါက်များမှတစ်ဆင့် ပူသောလေများကို စုဆောင်းသည့်အရာများမှ မျှော်စင်အတွင်းသို့စုပ်ယူသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် နေရောင်ခြည်ဖြာခြင်းသည် အဆိုပါ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအပူစုဆောင်းမျှော်စင်ထဲတွင် အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ မျှော်စင်အတွင်းတပ်ဆင်ထားသော လေရဟတ်တာဘိုင်များသည် မျှော်စင်အတွင်းရှိ စွမ်းအင်များကို သူ၏ပန်ကာရွက်များကို ရွေ့လျားစေခြင်းဖြင့် စက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ နောက်တစ်ဆင့်တွင် ထိုစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် လျှပ်ထုတ်စက် ဂျင်နရေတာများမှ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဤနည်းပညာသည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး စွမ်းအင်အမြောက်အများကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သော်လည်း ပြည့်စုံသောစနစ် တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီး လည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော် ရှေ့ပြေးပုံစံအမျိုးမျိုးကို တည်ဆောက်လေ့လာပြီးဖြစ်သည်။
Memahami bahwa panas dari matahari bisa diubah menjadi energi listrik.
Memahami cara kerja menara surya berturbin udara yang menggunakan sinar matahari untuk memanaskan udara, yang kemudian menggerakkan turbin di dalam menara.
Memahami udara panas dapat menggerakkan bilah turbin.
အပ်ထိပ်ပေါ်တွင် ပန်ကာရှိနေပြီး မည်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသနည်း။ လှုပ်ရှားမှုရှိပါသလား။
မီးအိမ်ကို ဖွင့်လိုက်သောအခါ မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသနည်း။
3အပူချိန်များကို သင်သတိထားမိပါသလား။ ပြောင်းလဲမှုရှိပါသလား။ အကယ်၍ ရှိပါက မည်သို့ဖြစ်သွားသနည်း။ ရှင်းပြပေးပါ။